Htoonlin | SUNDEW MYANMAR
Posted on June 22, 2016 by Htoonlin
ပွင့်လင်း လွှတ်တော် Website ကို SUNDEW MYANMAR မှ Frontend ပိုင်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါ၀င်ခွင့် ရရှိခြင်း အတွက် ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်မိပါသည်။
Posted in General, News Tagged open hluttaw, SUNDEW MYANMAR, welcome Leaveacomment
Posted on June 13, 2016 June 13, 2016 by Htoonlin
ပျော်ရွှင်စရာ တနင်္လာနေ့လေးပါ။ အားလုံးပဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာကြပါစေ။ ဒီနေ့ June လ 13 ရက်နေ့ ကစလို့ SUNDEW MYANMAR ရဲ့ Team တစ်ဖွဲ့ဟာ Phone Corner Mobile Phone Shop ရဲ့ Project တစ်ခုကို စတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Phone Corner Mobile Shop ဟာ အမှတ် (၆) မြေညီထပ် ၊ ကျွန်းတောလမ်း ၊စမ်းချောင်းမြို့နယ် ။ (Chart Time ဘေး) မှာ June လ 21 ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရတယ်။
Posted in General, News Tagged new customer, phone corner, Website, welcome Leaveacomment
နိုင်ငံတကာ မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများစု ဟာ ယခု ၂၁ ရာစုမှာ E-mail Marketing ကို အသုံးပြု လာကြပါပြီ။ E-mail Marketing ဆိုတာကတော့ သင့်လုပ်ငန်း သင့် ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းကို စားသုံးသူ တွေ သိရှိလာအောင် Marketing လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ၂၁ ရာစုမှာ လူတိုင်းနီးပါး ကိုယ်ပိုင် E-mail Account တွေ တည်ရှိပြီး စီးပွားရေး လူမှုရေး တွေမှာ ဆက်သွယ်ဖို့ အသုံး ပြုနေကြပါပြီ။ ဒီတော့ E-mail Marketing လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်း တွေ အကြောင်းကို စားသုံးသူ အများစုက အလွယ်တကူ သိရှိလာနိုင်ပြီး နှစ်သက် သဘောကျတဲ့[…]
Posted in General, News Tagged E-mail Marketing, E-mail Service, SUNDEW MYANMAR Leaveacomment
Posted on May 31, 2016 June 2, 2016 by Htoonlin
SUNDEW MYANMAR ၏ Major NGO Customer တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Proximity Designs ရဲ့ “Paddy To Plate” Product Launch Show ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် SUNDEW MYANMAR TEAM မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း။ Photo Credit to Ms NOe’s FB.
Posted in General, News Tagged Congratulation, Proximity Design, SUNDEW MYANMAR Leaveacomment
Welcome RMS Engineering
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အင်္ဂါနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ SUNDEW ရဲ့ Customer အသစ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Myanmar RMS Engineering ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါရစေ။ SUNDEW မှ Myanmar RMS Engineering s အတွက် ဖန်တီးပေးနေတဲ့ လက်ရာတစ်ခုဟာ အများရှေ့ကို မကြာခင်မှာပဲ ရောက်လာတော့မှာပါ။ ***သင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Website တစ်ခု အတွက် SUNDEW MYANMAR မှ တာဝန်ယူပါရစေ။*** Phone – 018604303, 09420020344
Posted in General, News Tagged Engineering, New_Customer‬, RMS Engineering, SUNDEW‬ ‪MYANAMR‬ Leaveacomment
Welcome Kreate Holdings
Posted on May 27, 2016 June 2, 2016 by Htoonlin
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ သောကြာနေ့ပါ။ SUNDEW ရဲ့ Customer အသစ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kreate Holdings ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါရစေ။ SUNDEW မှ Kreate Holdings အတွက် ဖန်တီးပေးနေတဲ့ လက်ရာတစ်ခုဟာ အများရှေ့ကို မကြာခင်မှာပဲ ရောက်လာတော့မှာပါ။ TGIF Everyone! SUNDEW would like to warmly welcome our new customer ,Kreate Holdings . The project ,SUNDEW is creating for Kreate Holdings is coming soon. Thank You Xo Much.
Posted in General, News Tagged Food_Village‬, ‎Kreate‬, New_Customer‬, SUNDEW‬ ‪MYANAMR‬ Leaveacomment
Posted on May 13, 2016 May 13, 2016 by Htoonlin
Posted in General Tagged CMS, Marketing, Website Leaveacomment
Posted on May 12, 2016 May 13, 2016 by Htoonlin
လူသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို စားသုံးသူအများအပြားရှိနိုင်တဲ့ နေရာများ […]
Posted in General Tagged General, Knowledge, Marketing Leaveacomment
Posted on August 29, 2012 May 17, 2016 by Htoonlin
ကျွန်တော်တို့ ခြေလှမ်းသစ်တစ်ချို့ကို စတင်နေပါပြီ …ဘယ်ခြေစပြီး ညာခြေမြှောက်တဲ့ အဆင်ထိရောက်နေပြီ …. ဒီတော့ မြန်မာ ပြည်က လူတွေ အတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခု ထိ အကျိုး ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ် … ဘာလဲ ဆိုတော့ ….. ?